Etu esi amata nne na nna na-egbu egbu | Bezzia
Otu esi amata nne ma ọ bụ nna na-egbu egbu
Maria Jose Roldan | 19/03/2021 22:39 | Na-akụziri ụmụaka ihe
Ọ dị obere ịhụ nne ma ọ bụ nna maara na ọ na-egbu nwa ya nsi na na nurturing nyere adịghị ezu. Bụ ezigbo nne ma ọ bụ nna na-adabere n'ụkpụrụ dị ukwuu enyere nwa gị n'oge usoro agụmakwụkwọ nwata ahụ. Nna ga-enyere nwata ahụ aka ịkpa ezigbo agwa na ịkpa ezi agwa.
Ọ bụrụ na ọ bụghị, nne ma ọ bụ nna nwere ike ọ gaghị eme nke ọma ma ewere ya dị ka nne na-egbu egbu. N'isiokwu na-esonụ anyị kọwara n'ụzọ zuru ezu njirimara ndị a maara dịka nne na nna na-egbu egbu na-enwekarị na otu esi edozi ya ka usoro nne na nna bụrụ nke kacha mma.
1 Nchịkwa gabiga ókè
2 Oke egwu
4 Onye ikike
5 Ha tinyere nrụgide n'ọmụmụ ihe
6 Na-adịghị mma ma na-enweghị obi ụtọ na ụwa
Nchịkwa gabiga ókè
Nnukwu nchebe bụ otu n'ime njirimara doro anya nke doro anya nke nne na nna na-egbu egbu. Nwatakịrị ga-aza ajụjụ maka ihe ndị o mejọrọ n’ihi na nke a ga-enyere ya aka iji nwayọọ nwayọọ nwee ụdị mmadụ ọ bụ. Ngafe nke nne na nna adighi nma maka ezi mmepe nwa.
Ọ baghị uru ịta ụta na ịkatọ ụmụaka oge niile. Site na nke a, ùgwù onwe onye ụmụaka nwere na nwayọ nwayọ. Kwesịrị, kelee ha maka ihe ha rụzuru na ebumnuche ha. Nkatọ sitere n'aka ndị nne na nna na-ahapụ ụmụaka ịgbachitere oge niile ma chee na ha abaghị uru n'ihe ọ bụla ha na-eme.
Ndị nne na nna na-axicụbiga mmanya ókè na-achọkarị ọdịmma ụmụ ha. Ha anaghị enye mkpa dị iche iche ụmụaka nwere mkpa ma na-eche naanị maka onwe ha. Ishchọ ọdịmma onwe onye nanị na-emetụta ọnọdụ uche nke nwatakịrị ahụ n'ụzọ na-adịghị mma ma nwee ike ibute oke nchegbu na ịda mba.
Cessbụbiga ikike ókè bụ àgwà ọzọ doro anya nke ndị nne na nna na-egbu egbu. Ha anaghị agbanwe agbanwe megide omume ọ bụla nke ụmụ ha ma na-etinye ikike ha n'oge niile, nke na-akpata mmetụta nke ikpe ọmụma na ụmụaka. Ka oge na-aga ụmụaka ndị a na-etolite nwere ọtụtụ nsogbu nke mmụọ nke ahụ na-emetụta ndụ gị kwa ụbọchị.
Ha tinyere nrụgide n'ọmụmụ ihe
You gaghị amanye nwatakịrị ịmụ ihe ọ na-achọghị. Ọtụtụ ndị nne na nna na-arụgide ụmụ ha ịhọrọ ụdị ọrụ ha ga-arụ na-echebaraghị ihe ha chọrọ echiche.
Na-adịghị mma ma na-enweghị obi ụtọ na ụwa
Ndị nne na nna na-egbu egbu anaghị enwe obi ụtọ oge niile na enweghị obi ụtọ na ndụ ha na-eduga. A na-anakwere adịghị ike na enweghị nchekwube ụmụaka ahụ site na ihe ọjọọ niile nke a gụnyere. Ka oge na-aga, ha na-enwe obi nwute na nwute ụmụaka anaghị enwe afọ ojuju n'ihe ọ bụla.
Na mmechi, ụmụaka na-etinye nsi nke nne na nna, ihe na-emezu mgbe ị ruru ogo okenye. Ndị nne na nna ga-etolite ụmụ ha na-echebara usoro ụkpụrụ dị ka nkwanye ugwu ma ọ bụ ịhụnanya iji hụ na ha bụ ezigbo mmadụ ogologo oge. Ọ dị mkpa na ụmụaka nwere ike tozuo oke ma ghara igbochi ha n'ụzọ mkparị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ndị nne » Na-akụziri ụmụaka ihe » Otu esi amata nne ma ọ bụ nna na-egbu egbu
Too na mbara ihu gị, mepụta ogige mepere emepe
Ihe dị mkpa iji mepụta ụlọ ịsa ahụ n'ụlọ